.မွေးနေ့မှာ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကကို သိလိုတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့တဲ့ သားသားရွှေပိုင်လေး. – Askstyle
.မွေးနေ့မှာ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကကို သိလိုတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့တဲ့ သားသားရွှေပိုင်လေး.
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ရွှေပိုင်လေးကတော့ အရမ်းကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ ကလေးလေးအဖြစ် ပရိသတ်တွေသိထားကြပြီး အားလုံးက ဝိုင်းချစ်နေရတဲ့ အဆိုတော် ဇော်ပိုင်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ကတော့ သားလေး ရွှေပိုင်ရဲ့ အသက် (၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။
ရွှေပိုင်လေးက မွေးနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက လေးစားကြည်ညိုရတဲ့ ဆရာတော် ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကိုသားသား သိလိုတာတွေမေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အသက် (၉) နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ သားသားလေးရဲ့ သိလိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ရိုးသားစွာမေးမြန်းခဲ့ပြီး ဆရာတော်ကြီးကလည်း သားသားနားလည်လောက်မယ့် စကားလုံးလေးတွေ ရွေးချယ်ပြီး ဖြေဆိုပေးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ရွှေပိုင်လေးရဲ့ သူ့ရဲ့ Page ကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
သားသားမွေးနေ့အမှတ်တရ ဟောကြားပေးသောတရားတော်ကို နက်ဖန် မနက်၇နာရီမှာ ပြန်လည်မျှဝေ တရားအလှူ ပြုဦးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ လူကြီးတွေတောင် တွေးတောဖို့ခက်ခဲလွန်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို မေးမြန်းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ရွှေပိုင်လေးရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Shwe Paing
ပရိသတ္ႀကီးေရ .. ေ႐ႊပိုင္ေလးကေတာ့ အရမ္းကိုလိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ ကေလးေလးအျဖစ္ ပရိသတ္ေတြသိထားၾကၿပီး အားလုံးက ဝိုင္းခ်စ္ေနရတဲ့ အဆိုေတာ္ ေဇာ္ပိုင္ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ကေတာ့ သားေလး ေ႐ႊပိုင္ရဲ႕ အသက္ (၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္ ။
ေ႐ႊပိုင္ေလးက ေမြးေန႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ေလးစားၾကည္ညိဳရတဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုန္းဘုန္း အရွင္ဆႏၵာဓိက ကိုသားသား သိလိုတာေတြေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္ ။ အသက္ (၉) ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ သားသားေလးရဲ႕ သိလိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ႐ိုးသားစြာေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း သားသားနားလည္ေလာက္မယ့္ စကားလုံးေလးေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေျဖဆိုေပးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို ေ႐ႊပိုင္ေလးရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ Page ကေနတဆင့္ ပရိသတ္ေတြကို မွ်ေဝေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။
သားသားေမြးေန႔အမွတ္တရ ေဟာၾကားေပးေသာတရားေတာ္ကို နက္ဖန္ မနက္၇နာရီမွာ ျပန္လည္မွ်ေဝ တရားအလႉ ျပဳဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္ ။ လူႀကီးေတြေတာင္ ေတြးေတာဖို႔ခက္ခဲလြန္းတဲ့ နိဗၺာန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို ေ႐ႊပိုင္ေလးရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။